Ukukhwezwa Kweholo Lezisebenzi Kudala Inkulumo
WASHINGTON DC — Inhlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ), isisole umbiko kahulumende wokuthi uzakhweza iholo lezisebenzi zakhe esebenzisa isilinganiso sokuqina kumbe ukuwa komnotho welizwe, i-inflation.
Umphathintambo wezemali uMnu Tendai Biti uveze ngempelaviki ukuthi iholo lezisebenzi lizakhwzwa kuqala ngoZibandlela ngomnyaka ozayo.
Kodwa uBiti kasavezanga ukuthi lizakhwezwa ngesilinganiso esinganani esithi kuzakuya ngokuqina komnotho.
Imbiko le icunule ezinye izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi bona abathi iholo labo kumele lengezwe kusiya ngemali efunwa yimuli elabantu abayisithupha ngenyanga, iPoverty Datum Line, yona ekumadollar phose angamakhulu ayisithupha, $568 okwamanje.
IPTUZ ithi iholo lingakhwezwa kulandelwa indlela efunwa nguhulumende, izisebenzi ziyabe ziyathola okuyimadlana okuncane okungatsho lutho.
UNtungamili Nkomo weStudio Seven uxhume isiphathamandla sePTUZ uMnumzana Vusumuzi Mahlangu yena osole kakhulu uBiti esithi kamelanga ekhweze iholo lezisebenzi engakhulumisananga leezisebenzi lezi wezwa ukuthi zifuna malini.
Ingxoxo loMnu vusumuzi Mahlangu